सर्पको जिब्रो किन बिचमा फाटेको हुन्छ ? यस्तो छ यसको जिब्रोको रहस्य – tvNepali.net
सर्पको जिब्रो किन बिचमा फाटेको हुन्छ ? यस्तो छ यसको जिब्रोको रहस्य
सर्प देखि त सबैलाई डर लाग्ने गर्दछ किनकि यो हेर्दै पनि डरलाग्दो हुने गर्दछ । सर्पले डसेर धेरैको ज्यान गएको पनि हामीले सुन्दै आइरहेको छौ । सर्प एउटा घस्रने जीव हो जसले घस्रने क्रममा आफ्नो जिब्रो बेला बेलामा निकाल्ने गर्दछ जुन भयानक हुन्छ । धेरै मानिसहरुलाई के लाग्ने गर्थ्यो भने सर्पले आफ्नी त्यहि जिब्रो बाट डस्ने गर्दछ तर यो भनाइ सरासर गलत रहेको छ ।
सर्पको जिब्रो एकदमै संबेदनशील हुन्छ । यसले आफ्नो जिब्रोको प्रयोग गरि आफ्नो सुरक्षा पनि गर्ने गर्दछ । किनकि सर्पले सुन्न सक्दै र यसले आखा पनि झिम्क्याउने गर्दैन । सर्प र यसको जिब्रोको रहस्यबारे थाहापाउन भिडियो हेर्नुहोस् :
PreviousPrevious post:प्रेमको स्पष्ट परिभाषा, आखिर किन हुन्छ प्रेम ? Valentines Day Special
Next Next post:दुधमा बेसार मिसाएर सेवन गर्दा हाम्रो शरीरलाई हुने फाइदाहरु